Josefa ANDRIANAIVORAVELONA (1835 – 1897) | FJKM Ambonin'Ampamarinana
Teraka tao Ambohitromby tamin’ny 1 Janoary 1835 izy, zanak’Andrianavalona sy Razafimalala. Taizan’ny kristiana. Nianatra Soratra, namaky Soratra Masina sy tononkira maintimolaly. Niaina ny fivavahana kristiana tao anatin’ny fanenjehana. Nanambady an-dRaketaka Ravelonanahary ary niteraka 16 izy mivady. Nianatra tao amin’ny Kolejin’ny LMS manomana ho mpitandrina ny 1869 na dia efa lehibe aza.
Kristiana tao Ambatonakanga izy fa lasa mpivavaka teto Ambonin’Ampamarinana rehefa nijoro ny Fiangonana teto, 150 taona lasa izay. Lasa mpitandrina teto izy (1866 – 1897), dia mpitandrina malagasy voalohany. Niaraka tamin’ny misionera Briggs tamin’ny fiadidiana ny Fiangonana miray amin’Ambonin’Ampamarinana.
Mpitoriteny mahery, “Spurgeon Malagasy”, mpamoron-kira kristiana maro hita ao amin’ny fihirana FFPM izy. Resy lahatra fa tena Mpamonjy antsika Jesoa, mampahery antsika amin’ny fitsapan’ny fanenjehana, mampanantena antsika fiainana mandrakizay, tena tia tanindrazana izy.
Nampiova fo olona maro izy: Najorony ny Fiangonana Protestanta Antranobirika Fianarantsoa. Maro no natao batisa tamin’ny toriteniny tany Imerimandroso Alaotra (1893). Sesehena no nilatsaka ho mpandray ny fanasan’ny Tompo tamin’ny toriteny tany Ambohimahasoa (1895). Niara-nanao ny tranovato teto niaraka tamin’ny Fiangonana izy ary nitokana izany. Nandray anjara lehibe tamin’ny fanitsiana ny baiboly Malagasy, Diksionera velona nipetraka. Maty sesitany tany La Réubiob
Nitondra ny Fiangonana teto nandritra ny 32 taona (1866 – 1897)